UMalcolm X e-Ibadan, eNigeria: UMalcolm X (1925-1965) ngesinye sezibalo ezibaluleke kakhulu kumbangela ye-Afrika yaseMelika "Umshumayeli kanye nokhulumela iSizwe of Islam (NOI) iminyaka eyishumi, wayesolwa ngokushumayela ngenzondo "
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Ngo-Ephreli 20, 2020 05: 43 Awekho amazwana
Ngo-1963, wahlukana ne-NOI nemibono yayo yokuhlukanisa. Ukuhambela kwakhe uhambo lokuya eMecca ngonyaka olandelayo kwasiza ukumenza isithonjana somhlaba jikelele, kepha uMalcolm X naye wabumbeka ... Funda kabanzi
Phakathi kukaYahweh, uNkulunkulu ka-Israyeli noSathane (uLusifa, uDeveli), ubani owabulala kakhulu abantu emhlabeni? UNkulunkulu ka-Israyeli angu-2038,344 ubulewe noSathane 10 wabulawa: nangu amasonto acebile emhlabeni okuthiwa ... (VIDEO)
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: March 28, 2020 00: 00 Awekho amazwana
ISonto likaJesu Krestu labaNgcwele bezinsuku Zokugcina -67,0 billion zamadola amaCatholic Church -30 billion billion ama-Australia amaCatholic Church -20,9 billion dollars Church ... Funda kabanzi
Isiko LaseYoruba: Ingabe Kufanele Siqhubeke Ukugubha Umshado Ka-Ogun no-Osun? Njengoba kungenzeka uqaphele, ama-Orisas amaningi ashada ngezikhathi ezahlukahlukene "Akuwona umbuzo womqondo womuntu womshado kunobumbano lwezinto ezithile zaphezulu"
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: March 13, 2020 00: 00 Awekho amazwana
Inyunyana ka-Ogun no-Osun ingenye yemishado eye yahlolwa okungenani yalezi ezimbili ze-Orisa, kepha ibalulekile e-IFA (ngokomoya ... Funda kabanzi
Wabe eseyiswa eKemet (iGibhithe lasendulo) waba u-Uraeus (ababeqalwa abaseGibhithe lasendulo emakhanda abo); bese idluliselwa ku-Andamanese yaseNdiya yasendulo ... Funda kabanzi
Indaba engaziwa yomuntu owayeqothula abamnyama / nabase-Afrika (1745 kuya ku-1797): umNigeria, "u-Olaudah Equiano", obaba wayeyinduna ye-Ibo, wazalwa ngonyaka we-1745 eningizimu yeNigeria
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Januwari 13, 2020 02: 22 Awekho amazwana
Eminyakeni eyi-11, u-Olaudah wathunjwa ngabadayisi bezigqila abamnyama / base-Afrika futhi wathengiswa njengesigqila ezweni elisha. I-Equiano, eqanjwe ngomunye wabanikazi bayo abaningi, uGusta ... Funda kabanzi
ISonto labanqunu: sizobona konke kulomhlaba, kunamazwe amathathu emhlabeni ahlukumeza igama likaNkulunkulu wawo ka-Israyeli, sinayo i-USA, iCongo neNigeria… (VIDEO)
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Ngo-Novemba 5, 2019 07: 00 Awekho amazwana
Kuma-nudists, lapho ufenda, futhi ungathatha ijakhethi. "Kungani? Asikaze simbone oyimpumputhe ekamu lobu-nudist! "EMelika namuhla, siyabona ... Funda kabanzi